Ibhalansi Pad Factory - China Ibhalansi Pad Abakhiqizi, abahlinzeki
Isihlungi se-PE Esihlangene
Imibala emibili ye-TPE Yoga Mat
Umbala owodwa we-TPE Yoga Mat
Incazelo:Ibhalansi yokuthuthukisa ukuzinza, ukuguquguquka, namandla; ilungele ukuzivocavoca nsuku zonke, ukuzivocavoca okukhulu, nokuqeqeshwa ibhalansiYenziwe ngezinto ze-EVA ezinobungani bemvelo ngenhlanganisela ephelele yobumnene namandla ahlala isikhathi esideI-textured non-slip, indawo emelana nezithukuthuku yokubamba okuphephile — asikho isidingo sokukhathazeka ngokushelela noma ngokushelela .
Ikhwalithi Ephakeme Evaliwe Yeseli: Kwakhiwe ngogwebu lwe-EVA oluthambile futhi oluqinile ukwengeza ukuqina nokuphepha okwengeziwe
Isakhiwo Esingashelelwanga Esenziwe Ngombhalo: Umugqa wobufakazi bokujuluka obumbumbulu unikeza ukubambelela okwengeziwe, kuvimbela ukushelela noma ukushelela ngisho nasekusebenzeni okujulukayo
Okunhlobonhlobo Ibhalansi Pad:Ilungele yonke iminyaka namazinga wokuqina. Ingasetshenziselwa ukwandisa ubunzima bokuzivocavoca okuvamile njengama-lunges, ama-push-up, ama-squats, ama-sit-up, kanye ne-yoga poses
Osayizi Iyatholakala:Singanikeza osayizi abajwayelekile, abanjengo-40 * 35 * 5cm (350g), 40 * 50 * 6cm (500g), no-42 * 52 * 6cm (530g). Ngaphezu kwalokho, sinesevisi yangokwezifiso, ngakho-ke ungakhetha abanye osayizi obafunayo.
Uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu, sicela
shiya imininingwane yakho yokuxhumana, singabantu
amahora angama-24 aku-inthanethi.